China 60x60x120 CM Khulisa intente Customized Ibhokisi yokuKhula IGadi Room umzi-mveliso kunye nababoneleli | Virex
I-VIREX yokukhulisa uyilo lwentente ibonelela ngokukhula okubonakalayo kokukhanya kunye nokuhanjiswa kokukhanya, ukubonakaliswa okuphezulu, ukuze izityalo zakho zifune ukukhanya okungakumbi.
Yenziwe nge-600D canvas, ayixhathisi ukukrazuka, ukumelana nokukhanya ngakumbi, yomelele ngakumbi, ikhuselekile, kwaye yenze eyona ndawo ilungileyo yokukhula kwakho kunye nezityalo zakho.
Umnyango mkhulu ngokwaneleyo ukuba ungene kwaye uhambise izityalo; Ifestile yokujonga, ukukroba okufanelekileyo; Iivents ezininzi ezijikelezayo, ezifanelekileyo kwiisayizi ezahlukeneyo zeefilitha zefeni; itreyi ekwaziyo ukususwa ukuze igcinwe icocekile; Isinyithi esizinzileyo I-Angle adapters kunye nezibonda ziqinisekisa ukhuseleko kunye nokuzinza kunye nenkxaso ukuya kwi-110 LBS.
I-zipper ephezulu kunye nokuthunga: Umsebenzi onzima oqinileyo kunye ne-zipper elula eqinile, edityanisiweyo kabini, i-line emnyama ephindwe kabini yenza itywina eliqinileyo. I-zipper ivula kwaye ivale ngokulula, kwaye intente eqinile ivala konke ukukhanya.
1.Material:600 D ilaphu oxford kunye ne-95% ebonakalisa i-mylar.
2.Ubungakanani: 60 * 60 * 120 cm
3.Uphawu: Isakhelo setyhubhu yokupeyinta emhlophe, izihlanganisi ze-ABS, iiVenti zomoya, iMesh Window, amabhanti.
4.Ukupakisha: 1 iipcs / ibhokisi
60*60*120cm (ubungakanani obulungiselelweyo)
Izinto eziphathekayo Oxford mylar
A: Ngokuqhelekileyo i-MOQ yi-50 pcs, nceda uqhagamshelane neentengiso ukuba sinama-stocks.
Ngaphambili: 300*300*200 CM ehlala ixesha elide lokuKhulisa ibhokisi yeTente yokuTyala iOxford Mylar
Okulandelayo: Khulisa intente 100*100*200 CM Hydroponics Ukutyalwa kweGadi yangaphakathi
Khulisa intente 100*100*200 CM Hydroponics Indoor Gar...
300*300*200 CM ehlala ixesha elide Khula Ibhokisi yeTente yokuTyala Iinkabi...
80*80*160 CM Khulisa intente Hydroponics Indoor Gard...